10ka codsi ee furan ee ugu fiican Android | Androidsis
Ignacio Sala | 08/06/2021 12:00 | Codsiyada Android
Waxaan ku noolnahay xilli ay asturnaanta u noqotay mudnaanta malaayiin dad ah, dadka bilaabay inay ka walwalaan waxa xogta la soo ururinayo iyo daaweynta dheeraadka ah ee ay helaan, ahaanshaha iibinta dhinacyada saddexaad inta badan meesha loo socdo.
Ilaa khabiir dhanka amniga ah uu sifiican u falanqeeyo howlaha codsi, ficil ahaan macquul maahan in la ogaado hadii codsigu runti sameeyo waxa uu sheegayo oo kaliya uu kaydiyo xogta aan horey u idmanay. Dariiqa kaliya ee lagu ogaan karo hubaal haddii arintu sidan tahay, waa haddii codsigu yahay il furan.
Faa'iidada ugu weyn iyo isla waqtigaas soo jiidashada ugu weyn ee codsiyada isha furan waa in lambarkoodu u furan yahay qof walba, sidaas darteed baahi uma qabo waqti kasta inuu been sheego ku saabsan xogta ay ururinayso waqti kasta ama ku saabsan qarinta astaamaha qarsoon ee laga yaabo inay dhaafto xayiraadaha nidaamka hawlgalka.
Inta badan, haddii aysan dhammaan ahayn, munaasabadaha, codsiyada isha furan waa bilaash waana waxaa lagu hayaa iyada oo ku saleysan deeqaha isticmaalayaasha adeegsada codsiyadooda, markaa, markasta oo ay suurta gal tahay, haddii aad isticmaasho dalab noocan ah, tixgeli suurtagalnimada inaad iskaashi dhaqaale la yeelatid.
4 Albaab furan
9 Sirta Xogta DuckDuckGo
10 Boostada K-9
12 Maamulaha Faylka Amaze
14 Kursiga Laydhka 2
15 Falanqeeyaha Wi-Fi
VLC waa mid ka mid ah codsiyada ugu caansan adduunka ee loogu talagalay noqoshada il furan, codsi la hayey 20-kii sano ee la soo dhaafay oo keliya iyada oo loo marayo deeqo. VLC waa ciyaaryahanka ugu fiican ee maanta la heli karo madal kasta, maaddaama ay ku habboon tahay dhammaan koodhadhka cusub iyo haysashada, suuqa, labadaba maqal iyo muuqaal.
Sidoo kale, waxaa laga heli karaa dhammaan barnaamijyada waliba bilaash. Kaliya laakiin codsigan ayaa ah in nashqadeyntiisa la cusbooneysiin karo si ay ula jaanqaado Android una siiso waxqabad dheeri ah oo dheeraad ah filimada ama taxanaha aan soo saari doono ... Laakiin dabcan, waa codsi furan oo furan oo ku filan inuu xor ahaado.
Mid kale oo ka mid ah fiidiyowyada cajiibka ah iyo kuwa maqalka ah ee laga heli karo qaaciddada isha furan ayaa laga heli karaa Kodi, oo ah barxad nKuu ogolaanayaa inaad maktabaddeenna filimada u rogto Netflix iyo in runtii wax yar ama aan waxba ka jirin ay ka hinaasaan barnaamijyadan (marka laga reebo buugga).
Haddii aad rabto inaad abuurto a xarunta warbaahinta Si aad uga ciyaarto sawiradaada ama fiidiyowyadaada meel kasta, waxaad siin kartaa Kodi fursad, codsi koodhkiisa laga heli karo GitHub.
Oo waxaan sii wadeynaa inaan kala hadalno codsiyada multimedia-ka ah 'NewPipe', oo ah mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan suuqa ee barnaamijyada Android ee hadda la heli karo. NewPipe wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku raaxeysano dhamaan waxyaabaha YouTube ka kooban laakiin howlo dheeri ah oo kaliya isticmaala YouTube Premium leeyihiin, sida dSoo dejinta fiidiyowga iyo dib u soo celinta ayaa asal ah.
Sida iska cad, ahaanshaha tartan toos ah barnaamijka YouTube, NewPipe lama heli karo iyada oo loo marayo Play Store, laakiin waan awoodnaa si toos ah uga soo dejiso boggooda GitHub, halkaas oo aan sidoo kale ka heli karno nambarka arjiga.
Haddii aad raadineyso a buuxi codsi si aad u qaadatid sawirradaada ama fiidiyowyadaada Melaha ugu cadcad furan, dalabka aad ka raadineyso Kaamirada Furan, codsi na siiya howlo badan iyo nooc kasta oo ay tahay inay ku kacdo gacan iyo lug. Laakiin maya, codsigu gebi ahaanba waa bilaash oo lambarkiisa ayaa laga heli karaa iyada oo loo marayo SourceForge.
Codsiga Signal wuxuu u noqday beddel aad u fiican dhammaan kuwa isticmaala ee runtii ka walaacsan farriimaha joogtada ah ee WhatsApp ee ku saabsan waxa qorshaynaysa in lagu sameeyo xogteenna.
Xalka waxaa laga helaa Signal, mid ka mid ah barnaamijyada fariimaha ugu ammaanka badan Iyo inay sidoo kale tahay ilo furan, sidaa darteed waa dammaanad dheeri ah tan iyo markii ay xaqiijinayso inayna gabi ahaanba ka soo ururineynin wax xog ah wadahadalladeenna.
Sida Kodi oo kale, koodhka codsigan farriinta waxaa laga heli karaa GitHub. Codsigan, sida VLC waxaa loo hayaa oo keliya iyadoo lagu saleynayo deeqaha shakhsiyaadka, Marna kama iman shirkadaha ama maalgelinta raasumaalka ee ay tahay inaad ku khasabto waa in wax mustaqbalka.
Signal - Fariin gaar loo leeyahay
Developer: Mu'asasada Saxiixa
Barnaamij kale oo fariin ah ugu caansan iyo in bil kaste ay kasbadaan malaayiin isticmaale waa Telegram, oo ah codsi sidoo kale ka dhigaya nambarkiisa qof walba inuu maro GitHub.
Si ka duwan Signal, Telegram dhaqaale ahaan ay ku taageerto deeqaha shirkadaha waaweynSi kastaba ha noqotee, sanadihii la soo dhaafay waxay yareysay ku tiirsanaanta inay soo bandhigto xayeysiis ku saabsan marinnada kanaalka, kanaallada ay inbadan iyo in ka badan u adeegsadeen shirkado badan.
Hay'adda 'Mozilla Foundation' waxay ka dambeysaa Firefox, oo ka mid ah daalacashada waxyaabaha sida gaarka ah diirada u saaran ee aan ka heli karno suuqa maanta. In kasta oo guusha Chrome ay hoos uga dhacday xaggeeda tirada dadka isticmaalana ay aad hoos ugu dhacday, haddana waa maanta biraawsar aad u fiican oo xisaabta lagu darsado. Koodhka Firefox waxaa laga heli karaa bogga internetka ee Mozilla iyo illaa GitHub.
Firefox: biraawsar deg deg ah, gaar ah oo aamin ah
Beddelka kale ee aadka u fiican ee laga heli karo suuqa furan ee furan oo ku habboon Android waxaa laga helaa Brave, oo ah biraawsar aan diiradda saarin keliya asturnaanta isticmaalaha, laakiin sidoo kale, waxaa ka mid ah xayeysiis xayeysiis awood badan.
Koodhka arjiga waxaa laga heli karaa iyada oo loo marayo GitHub oo lagu daray, waxaa loo heli karaa labada macruufka, Windows, Linux iyo Mac. Waad ku mahadsantahay iswaafajinta calaamadaha, waxaan u adeegsan karnaa biraawsarkayaga ugu muhiimsan dhammaan qalabka haddii aan rabno inaan ka faa'iideysano asturnaanta iyo xayeysiinta ay isku dhexjirto.
Brave Web Browser geesinimo leh: Browser Web gaar loo leeyahay
DuckDuckGo ma aha oo kaliya mashiin raadis taas ma duubo waxqabadkeena, laakiin marka lagu daro, waxay sidoo kale na siisaa biraawsar il furan oo kor u qaada calanka asturnaanta marwalba.
Markaan raadineyno oo aan dhex mushaaxeyno, DuckDuckGo ayaa na tusaya qiimeynta Darajada Asturnaanta markaad booqato degel internet, qiimeyn noo ogolaaneysa inaan ku ogaanno heerka ay gaarsiisan tahay ilaalinta marka aan jaleecno. Koodhka codsigan waxaa laga heli karaa iyada oo loo marayo GitHub.
K-9 Mail waa iimayl furan oo iimayl iimayl ah oo taageeraya xisaabaadyo badan, raadin, IMAP riix emayl, iskudhafid faylal badan, calaamadeyn, diiwaangelin, saxiixyo, BCC-self, PGP / MIME ... soo saaray bulshada isticmaala. Koodhkaaga ayaa laga heli karaa iyada oo loo marayo GitHub.
Developer: K-9 Dog Walker
Waxyaabaha sida ay yihiin, safarka oo aan la isticmaalin Khariidadaha Google waxay noqon kartaa waali in adeegsadayaal badani aysan diyaar u aheyn inay ordaan. A xal il furan oo xiiso leh Waxaan ka helnay OsmAnd, oo ah codsi furan oo loo adeegsado khariidadaha OpenStreetMaps, oo ah meel laga helo ilo furan.
Codsiga wuxuu noo ogolaanayaa inaan soo dejino khariidadaha iyo dariiqyada lagu shaqeeyo iyada oo aan la helin qadka internetka, raadinta jidadka gaadiidka dadweynaha, xadka xawaaraha waddooyinka, sameynta dariiqyo shaqsiyeed, raadinta meelaha nasashada ... GitHub.
OsmAnd - Khariidadaha qad la'aanta iyo Navigation
Maamulaha Faylka Amaze
Maamulayaasha faylasha ee ku wareegaa Android si xur ah Play Store. Intooda badani waxay leeyihiin faaruqin xog ah runtiina kuma kalsoonaan karno badankood. Inta badan laakiin dhammaantood maahan, tan iyo xalka tan arrinta daahfurnaanta ee maareeyayaasha faylka Waxaan ka helnaa Maareeyaha Faylka Amaze, codsi leh tiro badan oo shaqooyin habayn iyo shaqooyin ah oo koodhkooda laga heli karo GitHub.
Developer: Kooxda Amaze
OpenScan waxay na siisaa codsi il furan oo ku habboon iskaan nooc kasta oo dukumiinti ah, marka lagu daro in laguu oggolaado inaad natiijada ugu beddesho qaab PDF ah dhowr ilbiriqsi gudahood. Marka aan iskaanno dukumiintiga, waan goosan karnaa sawirka waxaanan kula wadaagi karnaa qaabka muuqaalka iyo waliba PDF.
Ahaanshaha il furan, ma ururinayo mid ka mid ah xogta in aan ku abuuri karno isticmaalka barnaamijka.
OpenScan - Scanner App-ka Dukumentiga Bilaashka ah
Developer: Horumarinta Ethereal
Haddii aad rabto inaad qalabayntaada u qaabeysid sidii Pixel oo aadan rabin inaad bixiso hal euro oo waliba aad adeegsato codsi furan, xalka waxaa laga helayaa Lawnchair Launcher, launcher ah wax yar ayuu ka hinaasaa Nova Launcher Sida codsiyada kale, koodhkeeda waxaa laga heli karaa iyada oo loo marayo GitHub.
Wifi Analyzer wuxuu noo ogolaanayaa inaan hagaajino howlaha shabakadeena WiFi iyadoo la falanqeynayo shabakadaha WiFi ee bey'adeena, iyadoo la cabirayo awooda ishaarooyinka iyo in la aqoonsado kanaalada dadku ku badan yihiin. Tani waa codsiga kaliya ee furan ee furan falanqeeyaan shabakadeena Wi-Fi, wax ay tahay in la tixgeliyo maaddaama Play Store ay ka buuxaan noocyada noocyada codsiyada ah, codsiyada laga yaabo inay ku jiraan koodh xaasidnimo ah.
Ahaanshaha il furan, isticmaale kasta ayaa si fudud u hubin kara sida arjigu u shaqeeyo iyo haddii uu ururinayo xog kasta. Maxaa intaa ka badan, uma baahna xiriir internet, taas oo hubinaysa inaadan ka soo qaadin wax xog ah qalabkeena. Codsiga waxaa lagu soo saaray mutadawiciin waxaana lambarkiisa laga heli karaa iyada oo loo marayo GitHub.
Falanqeeyaha WiFi (il furan)
Developer: Horumarinta Barnaamijka VREM
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 10-ka barnaamijyadood ee il furan ee ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android